သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅) | ဧရာဝတီ
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅)
ထက်အောင်ကျော်| October 13, 2011 | Hits:818
| | မောင်တော် ကျိုးဖိုးနဲ့ မင်းသမီး အမရာတို့တွေ့ပြီ။
မောင်တော်စခန်း တနေရာ (ဓာတ်ပုံ - စာရေးသူ၏ facebook မှ)
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၁
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၂
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၃
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး ၄
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃)
kyaw thu October 13, 2011 - 6:38 pm	ကိုဝင်းထိန်ရေ
ကိုတင်လေးတို့ဘယ်လိုကျဆုံးသွားတယ် ဆိုတာလေးကိုလည်း တိတိကျကျရေးပြပါနော်။ ကြွေလွင့်သွားသော ကြယ်ပွင့်များမှာ ပါသလောက်လေးတော့ မရေးပါနဲ့
Reply	စိုင်းဟခ် October 13, 2011 - 8:28 pm	ကောင်းတယ်ဗျာ .. ဒီဟာတွေကို ebook ထုတ်ပြီး .. ဝေပေးပါလားဗျ .. email ထဲပို့ထားပေးရင်ပိုပြီးကောင်းတယ် ..
Reply	ခေတ်မင်းဆက် October 13, 2011 - 10:37 pm	ဆက်ရေး ပါဗျာ။ ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ရောက်ခဲ့ တုန်းက ထီးခီး။ အလက်စတို နဲ ထီးထ တို့က အကို ပြော တဲ့ ပုံစံ နဲ ဆို အတော်ကို ပြောင်းလဲ သွားပြီ ဗျာ။ အလက်စတိုက နဲ ဟိုဘက် ထိုင်းဘက်ထွက် တဲ့ လမ်းခွဲ မှာ ကားပျက်လို့ ထမင်း ငတ် ခဲ့ ရတယ်ဗျ။ အခု အကိုရေး တဲ့ စာ နဲ ယှဉ်လိုက်တော့ ကျနော် အဲဒီတုန်းက ခံစား ရတဲ့ ဒုခ ကို အတော်ဆိုးလှပြီး ထင်ဒါတွေ က ဆီနဲ ရေ လို ကွာသွားတယ်ဗျ။ ဆက်ရေးပါဗျာ အားပေး နေပါတယ်
Reply	င၀ဲမှငပွေးသို့ October 14, 2011 - 4:16 am	မာရသွန်ခရီး(၅)ကို စိတ်ဝင်းတစားဖတ်မိပါတယ်ဗျာ အဲဒီတောလမ်းခရီးမှာ ဘယ်လောက် ပင်ပင်ပန်းပန်နဲ့ တောင်တက်တောင်ဆင်း ချောင်းကြိုချောင်းကြား ဒီကြားထဲတောဆင်းရိုင်းတွေလိုက်လို့ မပြေးခဲ့ရဘူးလားဗျာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုထိန်တို့အဖွဲ့ကိုလမ်းခွဲပြီး နိုင်ငံရေးဗဟုသုတနည်းတဲ့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ မနာမကျန်းဖြစ်ပြီး တောကြီးမှောင်နက်ထဲမှာ ၇ိတ်ခါပြတ်ပြီသံသရာလည်ခဲ့တာ သုံးညလောက်လမ်းမှားပြီးမှ ရောက်ခဲ့ရလို့ပါ ကံကောင်းထောက်မလို့ တောလိုက်မျောက်ပစ်သမားရဲ့ အကူအညီနဲ့ ထီထာအထက်ပိုင်းချောင်းဝလေးကို ရခဲ့တာပါ ကျနော်တို့အဖွဲ့မှာ ပါလာသူအဆိုးဆိုးကတော့ ၀က်သားဆိုအသားမစားအဆီကိုသာစားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် အီးဗလာဟင်ကို အလှည့်ကျကျောဘိုးထမ်းခဲ့ရလို့ တောထဲမှာဒုတ်ခခံခဲ့ရတာလေးကို ကိုထိန်ရဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီး ပြန်သတိရမိပါတယ်ဗျာ မာရသွန်ကျောင်းသား (၆) မှာတော့ ကိုထိန်တို့အဖွဲ့နဲ့ ကျနော်တို့ပြန်ဆုံတဲ့ အခမ်းလေးပါလာမယ်ထင်တာဘဲ့ ရေကန်မှာသင်တန်းအတူတက် ကိုထိန်တို့အဖွဲ့ထဲက သင်တန်းမှုးအရာခံဗိုလ်ဗိုလ်စောခု ကြက်ဆင်ခိုးစားတာလေးကိုပါ တင်ပေးပေါ့ဗျာ မနက်မနက်တိုင်း ပီတီပြေးချူံထဲဝင်ခို ပုန်းအောင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်လေးလဲ ရေးဖို့မမေ့နဲ့အုံးနော် လေးစားလျှက်
Reply	ငြိမ်းဝေ October 14, 2011 - 4:36 am	ကိုထက်အောင်ကျော်ရေ ခင်ဗျားစာတွေဖတ်ရတာ ကျနော့်ရဲ့ အရင်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ရှေ့တန်းခရီးစာတွေကို အသစ်ပြန်ရေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ရလောက်အောင် ခင်ဗျားစာတွေက ကောင်းလှပါတယ် လေးစားပါတယ် ကျနော် တလေးတစား စေါင့်ဖတ်နေပါတယ်
Reply	ထားဝယ် October 14, 2011 - 7:49 am	ကို ခေတ်မင်းဆက်
ဘယ်ခုနှစ်က ထီးထာ ကို ရောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေး ပြောပြပါလား
အလယ်စတိုနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကြားထဲမှာ ထီးခီးဆိုတာ ရှိသေးတယ်လေ အဲဒီမှာ ၂၀၀၈/ ၂၀၀၉ တုန်းက ထားဝယ်အိမ်ခြေ(ခန့်မှန်း) ခုနှစ်အိမ်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ထီးခီးတောင်ကုန်းပေါ်မှာတော့ မြန်မာ တပ်ရင်းတစ်ရင်း ထိုင်ထားပါတယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ တော့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ် တစ်တပ်ရှိတယ်လေ. အလယ်စတိုဆိုတာ ထီးခီးကိုသွားရင် တနာရီလောက်သွားရသေးတယ်ထင်ပါတယ်။
ထိုင်းဘက်ထွက်တဲ့လမ်းခွဲဆိုရင် ကိုခေတ်မင်းဆက် ရောက်တဲ့နေရာဟာ ထီးခီးပဲဖြစ်ရမယ်။ မင်းသမီးချောင်း ရေကြီးတဲ့ အချိန် ထီးထာကနေပြီး ထီးခီးကိုသွားရတာလောက်တော့ မဆိုးပါဘူးထင်ပါတယ် ကိုခေတ်မင်းဆက်ရယ်။
Reply	tharmanluther October 17, 2011 - 2:17 pm	well, I am waiting to see how many students and others were killed by KNU and by their own power struggle!!!!!!! Do you think you can tell the truth?
Reply	Lyn Lyn October 20, 2011 - 3:11 pm	စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စွန့်စားခန်းတွေပါပဲဗျာ။ အပိုင်းတိုင်းကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနေပါတယ်။ ဆက်လက် ရေးသားပါဦး။
Reply	phowa October 25, 2011 - 3:30 am	i agree with you ko kyaw thu.they have given their life for our country and our people.They areahero and honorable.
လူနည်းစုလက်ထဲမှာသာ ရှိနေသေးတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲ
ပါရမီအငှားယာဉ် ဒရိုင်ဘာ တပ်ထွက်ကြီးနှင့် စကားစမြည်
အသက်ဝင်တော့မည် တလင်တမယား ဥပဒေ လူ့အခွင့်အရေးကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ
မမြဝင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းစစ် မြေစာတပင်
ရေဘေးကယ်ရင်း ရေဘေးသင့်ခဲ့ရသည့် ကြက်ခြေနီ ဦးကျော်ကျော်လင်း
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့နယ်က စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘာဝတောင်ပေါ်ရေကန်
စစ်ပွဲများအကြားက အမေ့ခံ အမျိုးသမီးများရဲ့ ဘဝ